आफ्नै गोत्रको केटासँग बिहे गरेको भन्दै, पा’पी आफन्त भनौदाहरुले यसरी गरे ह’त्या ! – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/आफ्नै गोत्रको केटासँग बिहे गरेको भन्दै, पा’पी आफन्त भनौदाहरुले यसरी गरे ह’त्या !
आफ्नै गोत्रको केटासँग बिहे गरेको भन्दै, पा’पी आफन्त भनौदाहरुले यसरी गरे ह’त्या !
भारतको दिल्ली नजिकै २५ वर्षीया युवतीलाई आफ्नै गोत्रको केटासँग विवाह गरेको भन्दै परिवारले नै ह’त्या गरेका छन् । परिवारका सदस्यहरुले नै ती युवतीको ह’त्या गरी फा’लिदिएको घ’टना सार्वजनिक भएको छ । पूर्वी दिल्लीबाट कारमा उनको मृ’त शरीर राखेर गत जनवरी ३० मा यूपीको सिकन्द्राबादस्थित क्यानलमा फ्याँ’किएको थियो । शीतल चौधरी नामकी युवतीलाई उनकै अभिभावक र अंकलहरु मिलेर ह’त्या गरी फालेको समाचार भारतीय मिडियाले सार्वजनिक गरेका छन् । घ’टना सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले ती युवतीको परिवारका सदस्य सञ्जय र ओम प्रकाश, अंकलका दुई छोरा अंकित र प्रवेशलाई प’क्राउ गरेको छ ।
उनीहरुले शीतल चौधरीलाई अ’पहरणपछि ह’त्या गरेको दिल्ली प्रहरीको आ’रोप छ । शीतलका श्रीमान अंकित भाटीले मु’द्दा दा’यर गरेपछि प्रहरीले घ’टनामा चासो देखाएको हो। प्रहरीका अनुसार उनीहरुले गत अक्टोबरमा परिवारको अनुपस्थितिमा गोप्य रुपमा विवाह गरेका थिए । साथै परिवारभन्दा टाढा रहँदै आएका थिए ।
चौधरी र भाटी दुबैका परिवार डेरी व्यवसाय चलाउँदैआएका छन् । साथै उनीहरु छिमेकी पनि हुन् । पछिल्लो तीन वर्षयता उनीहरु ‘डेटिङ’ गर्दैआएका थिए । चौधरीको ह’त्यापछि परिवारका ६ जना मिलेर गाडीमा श’व राखी सिकन्द्राबादमा लगेर फा’लेको प्रहरीको भनाइ छ ।
भागवद् गीताका जीवन उपयोगी सूत्र, जो निकै उपयोगी छन्
रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा पत्रकारको ज्याकेट लगाएर प्रहरीलाई ढुङ्गा हान्ने युवक समातिए
विदेशबाट फर्किंदा यस्ता कागजात भएकाले पाउनेछन् पहिलो प्राथमिकता
उपचारपछि निको भई फर्केका व्यक्तिमा पनि सङ्क्रमण दोहोरिने सम्भावना हुनसक्छ : डब्लुएचओ